အစည်းအဝေးရဲ့ပထမတစ်ဝက်လောက်မှာဒီအုပ်စုပြောခဲ့တာတွေကိုငါဖယ်ထုတ်ပစ်ရတယ်။ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး လူတိုင်းကိုခြေတစ်လှမ်းပြန်လှမ်းပြီးငြိမ်သက်အောင်လုပ်ဖို့ကျွန်မကိုတောင်းဆိုတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။
အကြောင်းပြချက်မှာလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အသုံးပြုသူအားခွန်အားပေးသည်။ သင်ဖတ်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ မလိုက်၊ သူ့ကိုယ်သူစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့်ပြောသောလူတစ်ယောက်နှင့်မတူပါ ကျွမ်းကျင်သူ သူ၏ဘ ၀ တွင်ရေရှည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုမကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ပါ။
ငါတွစ်တာမှာအလိုအလျောက်တိုက်ရိုက်စာမသုံးသင့်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်၏ blog RSS feed တွင်စာရင်းသွင်းသူ ၅၀၀ ကျော်ကိုထည့်ပြီးပါပြီ။ ငါ၌တွစ်တာပေါ်တွင်နောက်လိုက် ၃၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ အလိုအလျောက် DM ဖြစ်သောကြောင့်လူများသည်မလိုက်နာပါ။ သင်မကြိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ မင်းငါ့နောက်ကိုမလိုက်ရဘူး ဒါမှမဟုတ်ရိုးရှင်းစွာသူတို့ထဲကရွေးချယ်ပါ!
ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာရောင်းလို့မရဘူးငါ့ကိုမပြောပါနှင့်။ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာရောင်းနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါစာလုံးပေါင်းကိုပြုပြင်ပြီးငါ့အခွင့်အာဏာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအရင်ရောင်းပြီးပျော့ပျောင်းတဲ့အခါအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေရတယ်။ ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ် ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အပြောင်းအလဲအများဆုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Youtube ပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ဝေရမည်ဟုမပြောပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုအချို့ရှိရန်ဗီဒီယိုများကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ပြီးလူများအားကျွန်ုပ်အားစာသားဖြင့်မဟုတ်ဘဲအမြင်အာရုံဖြင့်သိကျွမ်းလာစေရန်ပြုလုပ်ပါသည်။ ငါကအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်မဟုတ်ဘူး။ ဗီဒီယိုကိုအဆင်မပြေတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ်ယောက်ကအဲဒါကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာထက်အဲဒါကိုရှောင်ပါ။
နေရာတိုင်းမှာ ... ကြော်ငြာဖို့မငါ့ကိုမပြောပါနဲ့။ ငါ၌တစ်နေ့လျှင် thousands ည့်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၊ စာရင်းသွင်းသူထောင်ပေါင်းများစွာ၊ နောက်လိုက်များနှင့်အတူအောင်မြင်သောဘလော့ဂ်တစ်ခုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စကားပြောဆိုမှုများကိုရရှိကြသည် (Las Vegas တွင်ကျင်းပမည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်၌တစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာမီထပ်မံ)၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ ပရိုဂရမ်အခွင့်အလမ်းများနှင့် ငါနှစ်ခုစတင်၏ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်မိပါတယ်။ ငါ၏အပို့စ်များပေါ်တွင်နှစ်ဆလိုင်းများငါ့ကိုနှောင့်နှေးပုံရသည်။ ငါပျှမ်းမျှရက်သတ္တပတ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်နာရီပေါင်းရာနှင့်ချီ။ တစ်လလျှင်နှစ်ရာတန်ရာအနည်းငယ်လောက်လုပ်ရသည့်အတွက်တောင်းပန်သည်မဟုတ်ပါ။
ငါလိုအပ်တယ်ငါ့ကိုမပြောပါနှင့် စကားပြောဆိုမှုတွင်ပါဝင်ရန် ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ။ သင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၌သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ ငါကြိုးစားခဲ့တယ် ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ blog နှင့် Twitter မှ feeds များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပြီးတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် login လုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်ပါသည်။ Facebook က AOL ဗားရှင်း ၂၀ …ဒါမှမဟုတ် MySpace 20 …။ နံပါတ်တွေတိုးလာတယ်၊ သေချာတယ်…ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရာတခုခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါဝဘ်ကိုကြိုက်တယ် ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးကွန်ရက်ရှိကျွန်ုပ်၏အသွားအလာ၊ ကွန်ယက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုလောင်းကစားတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှု / လည်ပတ်မှု / တိုက်ရိုက် / အရန်ကူးခြင်း / မော်နီတာပေါ်တွင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါပုံကြီးတွေနဲ့အီးမေးလ်ပို့လို့မရဘူး၊ ငါ့အီးမေးလ်ရောင်းဝယ်ရေးကင်ပိန်းမှာစာသားမရှိဘူး။ ငါလုပ်ခဲ့ပြီးငါတို့ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုအမြင့်ဆုံးရခဲ့တယ်။ အဲဒါကျော်ယူပါ
cuss ဖို့မပြောပါနဲ့ ကျွန်ုပ်သည်ပရိသတ်ကိုမလေးစားဟုခံစားမိသောကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကျိန်ဆဲခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းကကျိန်ဆဲချင်တယ်ကွာကွာကျိန်ဆဲပါ! ငါဖတ်ရန်မလိုပါ (အောင်မြင်သောဆိုဒ်များအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်သော်လည်း) ငါမရကိုသာရွေးချယ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ run ချင်လျှင် ငွေအမြန်လုပ်ပါ တွစ်တာရှိအစီအစဉ်များ လုပ်သာလုပ်! အကယ်၍ သင်ကအမြတ်ထုတ်လျှင်၊ (ငါမင်းနောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သင့်ကိုဂရုစိုက်စရာလည်းမရှိဘူး။ ) အကယ်လို့သင် Facebook မှာနောက်တစ်ခုချိတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုသွားရှာပါ။ သင်အသုံးပြုလိုလျှင် Twitter ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုအနေနဲ့, လုပ်သာလုပ်! ငါ၎င်းကိုသတင်းခေါင်းစဉ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ကျပန်းလင့်ခ်တစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်း၌ပူးပေါင်းခြင်း၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကူညီခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သို့အသွားအလာကိုမောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ငါတစ်ယောက်တည်းနေပါရစေ! ငါလိုချင်ပေမယ့်သုံးနိုင်တယ်။
ငါကြိုးစားခဲ့သောငါ့ပရိသတ်ကိုမဟာဗျူဟာများနှင့်အတူမျှဝေ, ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန် နှင့် ဘာအလုပ်လုပ်တယ်၊။ ငါသူတို့ရရှိနိုင်သော tools များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များရှင်းပြပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များနှင့်ပရိသတ်များကိုစမ်းသပ်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ငါတိုင်းတာရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်တော်သောကြားခံတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်သေချာစေရန်လုံလောက်သောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ရန်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးသောအရာသည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
Mark Parker ပါ